Ma iga caawin kartaa inaan fahmo sida loo hagaajiyo liiska Amazon iyo darajo sare?
Looma yaabin in ay tahay wax aan suurtagal ahayn in la yareeyo liisaska Amazon adigoo si fudud u qoraya cod iyo xitaa si buuxda u sharraxaya sharaxaadda. Waa maxay sababta? Si fudud sababtoo ah rikoodhka rikoodhka raadinta ee gaarka ah ee xukumaya boggan internetka ah ee dad badani waxay qaadataa arrimo badan oo kala duwan oo tixgelin ah marka ay timaaddo meeleynta jagooyinka qaarkood ee alaab kasta oo iibka halkaa ku jirto. Taasi waa sababta ay u joogaan hal talaabo ka hor oo ka soo horjeeda qaybaha nuucyada / sheyga waxaad u baahan tahay faham qoto dheer oo Amazon SEO ah oo ka baxsan sanduuqaaga liiskaaga. Laakiin looma baahna in la walwalaa - wax walbaa ma aha mid dhib badan maxaa yeelay waxay u muuqan kartaa in jaleecada hore.
Waxyaabaha ay tahay in aad ufixin kartaa liiska Amazon sida saxda ah oo kaliya haddii aad ku sharraxayso qodobada saxda ah ee loo adeegsado iyada oo aan la isku darin qiimeynta A9 algorithm. Xaqiiqdii, A9 waxay inta badan ku tiirsan yihiin laba nooc oo lagu kala saari karo - saamaynta waxqabadka, iyo qodobbada ku habboon. Calaamadaha Waxyaabaha - waxay inta badan ku soo noqdaan abaabulaha muhiimka ah sida Tilmaame-celinta (CTR), heerka beddelidda, iyo sidoo kale horumarkaaga guud ee lagaa qaaday miisaanka. Si fudud u dhig, qodobadani waxay muujinayaan sida wanaagsan ee aad u sameysey alaabtaada iyo qancinta macaamilka ilaa hadda.
Cilaaqaadyada Ku Meel Gaarka ah - aad ayay u fududahay, maadaama ay saameeyayaashu muujinayaan sida wanaagsan ee alaabtaadu u socoto su'aalaha raadinta badiyaa ay isticmaalaan intooda badan dukaamada raadinaya alaabta Amazon. Si kale haddii loo dhigo, qodobbada ugu muhiimsan ee ku xiran waxay ku xiran yihiin isticmaalka saxda ah ee muhiimka ah ee muhiimka ah (iyo jumlado raadin dheer ah), iyo sidoo kale goobta ugu fiican ee aad u qaadato si aad u hagaajiso liiskaaga Amazon.
Dhamaan waxyaabahan ka mid ah waxqabadka iyo isku xirnaanta ayaa wadajir loo qaaday oo la tixgeliyey, halkan waa liiska dhibcaha qoraalka si aad u hesho sawir weyn oo ku saabsan kaabisashada farsamada iyo faham dhamaan nuts iyo bolts ee nidaamka. Sidaa darteed, haddii aad rabto in aad wax ka qabatid liistada Amazon sida iibsadaha dhabta ah ee waqtiga dheer iyo khabiir SEO ah - midba midka kale - tixgeli talooyinkan wax ku oolka ah ee hoos ku taxan oo lagu taageerayo dhowr ka mid ah tirooyinka adag ee qabow:
Waxay u egtahay mid aan maskax lahayn, laakiin bogga ugu horeeya ee natiijooyinka raadinta badanaa wuxuu helaa ku dhawaad ​​dhammaan khidmooyinka isticmaalaha (qiyaastii 97%);
Waa maxay xiisaha dhabta ah waa qiyaastii 70% codsiyada wax soo saarka ee ay adeegsadeen alaabooyinka dukaamada ku leh Amazon waa su'aalo raadin dheer ah;
Mawaadiicda muhiimka ah ee A9 ayaa loo arkaa inay tahay arrin aad u xoogan, sidaas awgeed hubi inaad ogtahay waxa aad sameyneyso, marka ay timaado inaad dooratid meesha saxda ah ee muhiimka ah ee muhiimka ah ee keywords keydkaaga, liiska dhibcaha xajmiga, sharaxaada sheyga laftiisa, iyo shuruudaha baayacmushtarka iibiya ee Central Central;
Qaadashada qalab cilmi baaris ah oo muhiim ah iyo qalabka barnaamijka CTR waa qalad culus ee iibsade kasta oo guuleysta oo iibiya halkaa, halkii nooc kasta oo raaxo ah;
Haddii aad rabto in aad ka dhigto liiskaaga Amazon liiska saxda ah laga bilaabo bilowga, waxaad diirada saartaa dadaalkaaga muhiimka ah ee SEO ku saabsan waxyaabaha soo socda ee ku soo qaadaya CTR, sida magaca sheyga, nooca shayga, qiimaha la dhigo, sawirada wax soo saarka, FBA (Riwaayad), helitaanka saamiyada, qaybta wax soo saarka saxda ah, calaamadda shayga ugu wanaagsan, qiimaha maraakiibta, muuqaal / faa'iidooyin hor leh, iyo inta kale ee iibsashada kale Source .